Bayern Munich oo noqotay Kooxdii ugu dambeysay ee ku soo biirta tartanka loogu jiro saxiixa Erling Haaland – Gool FM
Bayern Munich oo noqotay Kooxdii ugu dambeysay ee ku soo biirta tartanka loogu jiro saxiixa Erling Haaland
(Munich) 15 Nof 2019. Bayern Munich ayaa la soo warinayaa inay qaar ka mid ah kooxaha waa weyn ee Yurub kula soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Weeraryahanka Naadiga Red Bull Salzburg ee Erling Braut Haaland.
19-sano jirkaan gooldhaliyaha sare ah ayaa todobo gool ka dhaliyey Champions League xilli ciyaareedkan, waxaana uu afar gool dhaliyey kulankiisii ugu horreeyey tartankan oo uu wajahay naadiga Genk.
Haaland oo ah da’yar hibo leh ayaa shabaqa soo taabtay 19 goor 15 kulan oo uu illaa iyo hadda xilli ciyaareedkan u ciyaaray kooxda reer Austria.
Sida uu warinayo Warsidaha Kicker, Bayern ayaa si aad ah u xiisayneysay Haaland tan iyo markii uu weeraryahanku joogay Molde, waxaana ay haatan bilaabi doonaan qaabkii ay kula soo wareegi lahaayeen xiddigan xagaaga soo socda.
Haaland oo kooxo dhowr ah ay baadi-goobayaan ayaa lagu qiimeeyaa adduun dhan 85 milyan oo gini.
Waxaa shaaca laga qaaday in Manchester United ay hoggaaminayso haatan tartanka loogu jiro Haaland, halka kooxaha kale ee sare oo doonaya ay ka mid yihiin Barcelona iyo Real Madrid, waxaana ay si dhow indhaha ugu hayaan xiddigan reer Norway.
Siddeed xaqiiqo oo la diiwaan geliyey kaddib saddexleeydii xalay ee Cristiano Ronaldo